Sida loo iibiyo gawaarida GTA V (xitaa offline) | Golaha Moobaylka
Cristian Garcia | | Ciyaaraha
Haddii waxa aad rabto ay tahay inaad ku iibiso gawaarida GTA V Qaabkeeda sheekada, waa inaad ogaataa in nasiib daro, aysan kuu suurta geli doonin inaad sameyso qalliinkan. Marka lagu daro howlgalka marmar ee lagu siin doono adiga inta lagu guda jiro ololaha ciyaarta fiidiyowga si aad u soo ceshato gawaarida, sida howlgallada Devin Weston, ma jiraan wax shaqeynaya ama qalab sida lagu fulinayo iibinta gawaarida qaabka GTA ee sheekada V.
Suurtagalnimada iibinta gawaarida ee GTA V waxaa loo soo bandhigay kaliya GTA V khadka tooska ah, taas oo ah, waxaad u baahan doontaa inaad ku ciyaarto khadka tooska ah. Iyo wixii macluumaad dheeri ah ee ku saabsan, waxaa la bilaabay mahadsanid a DLC taasi waxay kuu ogolaaneysaa inaad soo ceshato gawaarida kadibna aad dhoofiso, si aad lacag uga kasbato iibinta kan dambe iyo dhoofintisa. Qaabka Sheekada GTA V, Si kastaba ha noqotee, waxa suurtagal ah waa in la rakibo a mod loogu talagalay PC taasi waxay kuu ogolaaneysaa inaad awood u siiso iibinta gawaarida.
Haa, arimuhu waa sidaas oo waa waxa jira laakiin hadaad wali isweydiiso sida loogu iibiyo gawaarida GTA offline, waxaad ku jirtaa maqaalka saxda ah. Qodobkaan, runti, waxaan ku bari doonaa nidaamyada ay tahay inaad raacdo si aad u awoodo inaad ku iibiso gawaarida cutubyada kala duwan ee cajaladan ciyaarta fiidiyowga caanka ah ee aan aadka u jecel nahay sidaasna aan ku kasban karno lacag aad u badan marna walwal kama qabin mar kale. Laakiin in la bilaabo, waa inaad ogaataa sida loo rakibo mods-ka GTA V (qaabka sheekada), iyo taas, waxaan sidoo kale ku bari doonaa maqaalkan inta lagu jiro khadadka soo socda.
Isticmaal mods si aad baabuurta ugu iibiso GTA V
Waxa aan u baahanahay inaan kuugu digo ayaa ah in isticmaalka wax ka beddelka ama mods-ka loo oggol yahay oo keliya qaabkan GTA V. Haddii aad ku bilowdo GTA V Online wax ka beddelid ama qaabab firfircoon way kari waxay keeneysaa mamnuucitaan kama dambeys ah ama xayiraad xisaabeed oo taasna, waxaad u baahan tahay inaad iibsato akoon kale mar kale si aad ugu ciyaarto GTA V khadka tooska ah.
Waxaa jira dhowr wax-ka-beddel ama mods oo kuu oggolaanaya inaad awood u siiso iibinta gawaarida GTA V ee PC-ga iyada oo aan wax ka dhicin ama koontadaadu mamnuucin. Midka aan kugula talinay qodobkaan inaad adigu isticmaasho waxaa lagu magacaabaa «Dukaameysiga Gawaarida Gawaarida Gawaarida ah ee Premium Deluxe », maaddaama aysan u baahnayn rakibidda wax kasta oo dheeri ah wixii aad horeyba ugu soo dejisay qaabkaas.
Haddii aadan wali rakibin wax qaab ah ama wax ka beddel ah ciyaarta fiidiyowga ee GTA V, waxaan ku tusi doonaa sida loo sameeyo xariiqyada soo socda, oo sidaas darteed, waad rakibi dhibaato la'aan qaabka kuu ogolaanaya inaad ku iibiso gawaarida gta v.
Sida loo soo dejisto Mods loogu talagalay GTA V
Si aad u hesho qaabka ku jira ee kuu oggolaanaya inaad ku iibiso gawaarida gta, waa inaad gashaa bogga internetka gta5-mods.com, halkaasoo aad sidoo kale ka heli doontid kuwo kale oo badan, oo riix batoonka soo dejiso markaad hesho «Premium Deluxe Motorsport Car Dealer» Kadib markaad soo dejiso .zip faylka uu webku si otomaatig ah u soo dejisan doono, waxaad u baahan doontaa inaad ka soo saarto waxyaabaha ku jira galka ugu weyn ee rakibidda GTA V.
Haddii ay dhacdo inaad iibsatay GTA V uumi markaa waxaad u baahan doontaa inaad ku dhacdo wadada C: Faylasha Barnaamijka (x86) Steampps steampps caanka ah ee Grand Xatooyada Auto Vhalka haddii aad ka iibsatay websaydhka Ciyaaraha Rockstar aad u baahan tahay inaad gasho dariiqa C: Faylasha Rockstar Grand Xatooyada Auto V Barnaamijka faylasha.
Sida loo keydiyo ciyaaraha flash-ka ee aad jeceshahay
Ka dib markaad geliso nuxurka feylka ee aad ka heshay zipka, gudaha galka weyn ee GTA V, waa inaad bilowdaa ciyaarta iyo wax yar oo kale. Markaad tan sameyso, waa inaad furtaa khariidada, halkaasna waxaad ka heli doontaa mid cusub icon dollar (lacagta ciyaarta ku jirta) : tani waxay tilmaamaysaa meesha ay ku taal khariiddada ciyaarta ee baabuurta lagu iibin karo, taas oo waliba ku siinaysa macluumaad dheeraad ah, oo aad ogtahay inay u Deluxe Premium Motorsport (Sida iska cad, qaabka) taasi waa, qaybiyaha Simecoon, dabeecad aad horey ula kulantay intii lagu jiray ololaha, maadaama aan si nabadgalyo ah kaaga tagay howlihii ugu horeeyay ee ciyaarta gudaheeda ee ay aheyd inaad qabato waqtigaas.
Markaad gaadho dhabarka dukaanka baabuur kasta oo aad haysato, waa inaad ku riddaa meesha goobaabin huruud ah ayaad arki doontaa. Ka dib, ciyaarta fiidiyowga ama qaabka, oo kuxiran sida aad u rabto inaad u aragto, ayaa ku tusi doona sanduuq qeybta bidix ee hoose ee shaashadda kaas oo kuu sheegaya inaad riixdo badhanka Iyo for iibiya gaariga ama furaha N si aad u joojiso gaariga iibinta howlgalka.
Marka aad ku xaqiijiso iibinta gaariga badhanka ku habboon ee aan horay u soo sheegnay, gaariga laftiisa waxaa la horgeynayaa ganacsadaha, intaas ka dib waxaa lagu iibin doonaa sicirka la tilmaamay ee aad horay u aqbashay. Markaad waqtiga ku qaadato GTA V, waxaad fursad u heli doontaa inaad iibiso gawaari kala duwan sidaasna waxaad ku kasban kartaa lacag badan. Ku iibinta gawaarida gta v waa hab wanaagsan oo lagu bilaabo lacag sameynta iyo maalgelinta wax kasta oo aad rabto inaad ka iibsato ciyaarta fiidiyowga.
Sideed ku ogaaneysaa inay lacagtu soo gaadhay akoonkaaga bangiga ee GTA V? Sida ugu fudud ee ogeysiin aan shaki ku jirin ayaa kugu wargelin doonta iibka lacagtana isla markiiba laguugu shubo koontadaada si aad u awoodo inaad isticmaasho.
Miyaad horeyba u taqaanay sida loo iibiyo gawaarida gta v? Ma leedahay qaab kale oo aad ku sameyso? Noogu sheeg sanduuqa faallooyinka sida aad u maamusho inaad u iibiso gawaarida ama qaabka aad ugu adeegato, ama haddii, liddi ku ah, aad leedahay qaab kale oo aad lacag ku hesho oo aan sidoo kale xiiseyno. Waxaan rajeyneynaa qodobkaan sida loogu iibiyo gawaarida GTA V inay waxtar kuu yeelatay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Golaha Moobaylka » Ciyaaraha » Sida loo iibiyo gawaarida GTA V (xitaa qadka)
Sida loogu beddelo IP-ga kombiyuutarkaaga qaab fudud
7 goobood oo ka wanaagsan Netflix oo gebi ahaanba bilaash ah